Khilaaf ka dhashay Dastuurka Galmudug – Kalfadhi
Khilaaf ka dhashay Dastuurka Galmudug
Wararka laga helaayo degaanada uu ka arimiyo maamulka Galmudug ayaa sheegaya inay jiraan khilaaf xoogan oo u dhaxeeya madaxda maamulkaasi taasi oo salka ku haysa arrimaha Dasturrka u degsan maamulka iyo caqabado kale oo ka jira isku darkii maamulkaasi iyo Ahlu Sunna.
Maanta waxaa gaaray magaalada Cadaado Madaxweyne kuxigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Carabey iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka Cali Gacal Casir kuwaasi oo horey u sheegay jiritaanka khilaafka madaxda maamulka.
Meelaha la isku haayo waxaa kamid ah xubnaha Ahlu sunna ka socday ee iyagu lagu biiriyay Baarlamaanka Galmudug waxaana arimahaasi oo dhan kasii weyn markii ay soo ifbaxday warar sheegaya in Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf uu mudo korarsiimo sameeystay taa oo ka hor imaanaysay Dastuurka maamulkaasi iyo mudadii uu xilka hayn lahaa.
Ilo wareedyadu waxa ay sheegayaan in waxyaabaha kale la isku haaya ee aan wali la iska qancin ay qeyb ka tahay in la jabiyay qaar kamid ah qodobadii ku jiray heshiiskii Ahlu sunna iyo Galmudug.
Madaxweyne Xaaf ayaa tan iyo markii uu la heshiiyay Ahlu Sunna caga dhigtay magaalada Dhuusamareeb oo xarun u ah maamulka.
Wasiiro ku cusub golaha wasiirada oo la dhaariyay
Xildhibaan warqad dacwo ah u gudbiyay baarlamaanka